Wasiir Fowziyo: Sharciga Golaha Mihnadlayaasha Caafimaadka, waxaa uu soo socday siddeed sannadood – Kalfadhi
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa isniintii shalay si aqlabiyad leh u ansixiyay hindise-sharciyeedka Golaha Mihnadlayaasha Caafimaadka Qaranka, kaas oo siddeed sannadood soo socday.
Kulankii 6-da bisha (Isniin) waxaa soo xaadirtay 143 Mudane, waxaana sharcigaasi u codeysay oo oggolaatay 137 Mudane, waxaa ka aamusay hal xildhibaan, waxaana sharcigaasi diiday shan Mudane.
Wasiirka caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Marwo Fowziya Abiikar Nuur, oo Golaha uga war-bixisay sharciga ayaa sheegtay in sharcigan uu soo socday siddeed sannadood, isla markaanna Baarlamaanka hadda shaqeeya uu horyaallay oo keliya laba sannadood.
“Waxaa ay geleysaa taariikhda maxaa yeelay sharcigan waa sharci xakameynaya dhaqaatiirta, hab-dhaqanka caafimaadka, manhajka lagu tababaraayo, goobaha caafimaadka iyo wax walba oo quseeya habsami u socodka howlaha caafimaadka”, ayey tiri.
“Bulsho aan kala dambeynin, dhibaatadeeda waan taabanay sodonkii sannadood ee lasoo dhaafay. Dad aan dhaqaatiir aheyn ayaa furta goobo caafimaad, jaamacado aan laga warqabin waxa ay dhigayaan, waxaa dalka usoo shaqa taga ajnabi badan oo aan la caddeyn karin shahaadada ay wataan iyo qibrada ay leeyihiin, isla iyaga ayaa bar-barad ku sameeya dalka, haddana damiin ayey dalka kusoo gallaan haddana ay kaga baxaan”.
Sharcigan waxaa uu xakameynayaa oo uu awood siinayaa golaha in uu xakameeyo arrimahaasi oo dhan, ayey hadalkeeda sii raacisay.